ऊँ भनेरमात्रै धर्म हुँदैन, काम गर्नुपर्छ : शैलेन्द्रकुमार पिया – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७६ कार्तिक १६, शनिबार ११:३२ गते
चितवनको नारायणगढस्थित पोखरा बसपार्क निवासी समाजसेवाको पर्याय बनिसकेका मुर्धन्य व्यक्ति हुन् समाजसेवी हुन् शैलेन्द्रकुमार पिया । उनी भरतपुर–१ मा वागीश्वरी आध्यात्मिक परिषद्, योगी नरहरिनाथ आश्रमद्वारा सञ्चालित आश्रमका अध्यक्षसमेत हुन् । प्रस्तुत छ : समाजसेवी पियासँग चितवन पोष्टले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
१) वागीश्वरी आध्यात्मिक परिषद्, योगी नरहरिनाथ आश्रमको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् न ?
– वागीश्वरी आत्यात्मिक परिषद्, योगी नरहरिनाथ आश्रम भनेको योगी नरहरिनाथले स्थापना गरेका हुन् । २०५२ साल भदौमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएको हो । त्योभन्दा पहिले नै उहाँ आएर बस्नुभयो र आश्रम सञ्चालन गर्नुभयो । यसले चाहिँ विभिन्नरुपमा परिषद्ले सञ्चालन गर्ने विधान बनाएको छ । विधानमा के लेखिएको छ भने खास गरेर प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालन गर्ने, गौशाला सञ्चालन गर्ने, गुरूकुल सञ्चालन गर्ने, कोटिहोम सञ्चालन गर्ने आदि धेरै विषयहरु राखिएको छ, र यो सञ्चालन गर्ने क्रममा हामी यहाँ प्रवेश ग¥यौँ । योगी नरहरिनाथ एउटा पुरानो इतिहास भएको मान्छे र इतिहासको खोजकर्ता पनि हो । नेपालका जडीबुटीहरुको पनि खोजकर्ता रहेकाले परिश्रम गरेर राष्ट्रका निम्ति केही गर्छु भनेर गरेको नाताले पनि उहाँलाई स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका हौँ ।
२) परिषद् र आश्रम एकैचोटि स्थापना भएको हो कि अघिपछि ?
– आश्रम त सुरूमा बस्यो नै । योगी नरहरिनाथलाई राजा महेन्द्रले दियालो बंगला बनाउने उद्देश्य रहेको अवस्थामा वागीश्वरीमै एउटा दियालो बंगला बनाउने इच्छा राख्नुभयो । योगी नरहरिनाथलाई त्यो ठाउँको वास्तु हेर्न लगाउनुभयो । योगी नरहरिनाथले राजा महेन्द्रलाई यहाँ बस्नुभन्दा अहिले दियालो बंगला जहाँ छ त्यहाँ बस्न उपयुक्त भएको बताउनुभयो र सोहीमुताबिक दियालो बंगला बनाउने काम भयो । यता, वागीश्वरीमा चाहिँ आफू आश्रम बनाएर बस्नुभयो योगी नरहरिनाथ र उहाँले नै वागीश्वरी आध्यात्मिक परिषद् गठन गर्नुभयो ।
३) यो योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो ?
– मेडिकल कलेजले छोडेर गएपछि यहाँ रहेका २२ वटा घरहरुलाई योगी नरहरिनाथको इच्छाअनुसार समाजलाई सेवा पु¥याउने उद्देश्यले यो जङ्गलको माझमा, तीर्थस्थलमा प्राकृतिक चिकित्सालय बनाउने सोच बनायौँ । त्यसको संस्थापक अध्यक्षको जिम्मा मैले नै पाएँ । प्राकृतिक चिकित्सालय सुरू गर्नुभन्दा पहिले हामीले आयुर्वेद अस्पताल पनि चलाउने कोसिस गरेका थियौँ, त्यसका लागि स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गरेका थियौँ । तर, तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले हामीमाथि आक्रमण सुरू ग¥यो । सेवाका लागि ल्याइएका कविराज डाक्टरहरु बस्नलाई डराउनुभयो । पेन्सनवालाहरु, अब भयो त भनेर उहाँहरु घर फर्किनुभयो । त्यसपछि डा. हेमराज कोइरालाको सामीप्यता र उहाँको चाखअनुसार नै हामीले प्राकृतिक चिकित्सा सञ्चालन गर्ने भनेर सुरूवात ग¥यौँ । डा. हेमराज पनि नरहरिनाथको भक्त हुनुहुँदोरहेछ । मलाई लाग्छ, २०७२ सालतिर यो चिकित्सालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
४) प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालनमा कुनै समस्या छन् कि ?
– मुख्य कुरा आर्थिक समस्या हो । तर, अब प्राकृतिक चिकित्सालयप्रति प्रदेश सरकार पनि गम्भीर छ । मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्दा यसलाईचाहिँ राम्ररी अगाडि बढाऔँ भन्ने कुरामा उहाँले पनि चासो राख्नुभएको कारणले यसको भविष्य राम्रो छ भन्ने लाग्छ । प्रदेश सरकारले गएको साल ५० लाख दिएको थियो, विभिन्न कर कटाउँदा ४३ लाख पाएका थियौँ । त्यो ४३ लाखले ठूलो भवनको काम भएको छ । अब करिब करिब एक करोडजतिको मेसिन उपकरणको आवश्यकता छ । हामी केही दिनअगाडि इन्डिया पुगेर आयौँ । त्यहाँ विभिन्न राम्रा–राम्रा प्राकृतिक अस्पतालहरु हे¥यौँ । त्यहीअनुसार मेसिन उपकरण अर्डर गर्ने पक्षमा छौँ । अब हामी केही दिनपछि हेटौँडातिर गएर इजाजत लिएर मगाउँदैछौँ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रूपैयाँ बजेट राखिदिएको छ । हामी त्यसको सदुपयोग गर्नेतिर लाग्दैछौँ ।
५) चिकित्सालयका अलावा अरु के–के सञ्चालित छन् अहिले ?
– वागीश्वरी आध्यात्मिक परिषद्को मातहतमा चिकित्सालय एउटा भयो । त्यस्तै संस्कृत गुरूकुल, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययन केन्द्र, गौशाला, कोटिहोम अहिले सञ्चालन भइरहेको छ ।
६) संस्कृत गुरूकुलमा कतिजना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ?
– अहिले २१ जना विद्यार्थी छन् । उनीहरुका लागि आवासीय सुविधा पनि छ । पछिल्लो समय हामीले भोजन कार्यक्रम सुरू गरिरहेका छौँ । कसैको जन्मदिन हुन्छ, कसैको छोरा जन्मिएको खुसीयाली हुन्छ त कसैको छोरी जन्मिएको खुसीयाली । कसैको पितृलाई चढाउने दिन हुन्छ । यी विविध कार्यक्रममा तथा आफ्ना खुसीका दिनहरुमा एक छाक भात ख्वाइदिऊँ भनेर चाहना राख्नेहरुसँग दिनको पाँच हजार रूपैयाँ लिन्छौँ र २–३ महिनादेखि यहाँ रहेका विद्यार्थी र गौसंरक्षकहरुलाई भोजनको व्यवस्था गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।
७) योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययन केन्द्रबारे पनि बताइदिनुहोस् न ?
– योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययन ६ महिने कोर्षको रुपमा सञ्चालन गरेका छौँ, जसका लागि प्रतिविद्यार्थी २० हजार लिने गरेका छौँ । वर्षमा एकपटक एउटा कोर्ष पढाइ भइरहेछ । अहिले यतिबेला भर्ना प्रक्रिया जारी छ, ५० जनाका लागि ।
८) यो ६ महिने कोर्ष गरेपछि जागिर पाउन सकिन्छ त ?
– नेपालमा यस्ता प्राकृतिक चिकित्सालयहरुमा सर्टिफिकेट भएका मान्छेहरु कम रहेछन् । त्यसैले, हामीले यो अध्ययनलाई सुरूवात गरौँ भनेर लागेका हौँ । जस्तैः फिजियोथेरापीवालाले त्यो पढेको हुनुप¥यो । मसाज गर्ने, वाफ दिने पनि पढेर जानेर कोर्ष पास गरेपछि हाम्रै चिकित्सालयमा पनि करिब करिब महिनाको १८–२० हजारको जागिर पाउन सक्छ । तर, पढेकाजति सबैलाई यहीँ काम दिन सक्ने अवस्था त छैन । नभए पनि उनीहरुलाई अरु अरु प्राकृतिक चिकित्सालयमा जानका लागि ढोका खुल्ला हुने भयो । काठमाडौँपछि यहीँ नै सञ्चालित छ यो कोर्ष । अहिले प्राकृतिक चिकित्साको डाक्टर हुने पढाइ त नेपालमा छैन । हामीले डाक्टरी पढाउने भनेर सोचेका पनि थियौँ । विभिन्न कारणले त्यो हुन सकेको छैन, तर हामी प्रतीक्षामा छौँ ।
९) यस प्राकृतिक चिकित्सालयमा टाढा–टाढाका जिल्लाहरुबाट समेत बिरामीहरु उपचारका लागि आएका देखिन्छन् । उनीहरुलाई बस्ने–खाने सुविधा के छ ?
– बिरामी र कुरूवाहरुलाई हामीले यहीँभित्रै बस्ने–खाने सुविधा मिलाएका छौँ । हाम्रो उद्देश्य के छ भनेदेखि हाम्रो एउटा ठूलो घरमा अस्पताल सुरू हुँदैछ, अहिले प्राकृतिक चिकित्साका साधनहरुको हामीसित कमी छ । त्यसले पूर्णता पाइसकेपछि एक किसिमले राष्ट्रियरुपमा नै यसलाई अगाडि बढाउने हाम्रो सोच छ र यो राष्ट्रियस्तरको बन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ ।
१०) गौशालामा कतिजति गाई छन्, गाईपालनको उद्देश्यचाहिँ के हो ?
– सवा सय लगभग गाई अहिले रहेको छ । योगी नरहरिनाथले सुरूमा जहाँ बस्यो त्यहीँ गाई पाल्ने चलन रहेछ । लोकल गाईको पिसाबबाट अर्क भन्ने चीज बन्छ जुन औषधिको रुपमा प्रयोग हुन्छ । अर्क क्यान्सर भएको, पेटको रोगको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ, त्यो राम्रै बिक्री भइरहेको छ । रामदेवले पनि यसको ठूलो प्रचार गरिरहेका छन्, योचाहिँ राम्रो औषधिका रुपमा मानिन्छ । हामीले यसलाई अझै विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ, किनभने जुन पिसाबचाहिँ थाप्ने हो । सुतिरहेको वा बसिरहेको गाईलाई एकपटक धाप मारेपछि उठ्छ र पिसाब फेर्छ, त्यो पिसाबलाई वाष्पीकरण गरेर अर्क निकालिन्छ । भुइँमा खसेको पिसाबबाटचाहिँ फिनेल बनाउन सकिँदोरहेछ, अहिले रामदेव स्वामीले बनाइरहनुभएको छ । त्यसरी नै हामीले पनि यहाँ फिनेल बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा बनाएका छौँ । अर्काे कुरा के भने यस्तै गौशालाहरुको अरु ठाउँमा अध्ययन गर्दा फेरि गाईको गोबरबाट धूप बनाउन सकिने रहेछ । गाईको गोबरलाई त हिन्दु समाजले शुद्ध मान्छ । त्यस कारणले त्यसले प्रभाव पार्छ होला भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामी त्यो सोचमा छौँ र त्यो कसरी बनाउने भन्ने खोजमा छौँ । यसरी गाईबाट फालिने मलमूत्रकै राम्रो उपयोग गर्न सके पनि वागीश्वरी आध्यात्मिक परिषद् सम्पन्न बन्न सक्छ । रामनाम जपेर, ऊँ भनेरमात्रै धर्म हुँदैन, काम गरेर देखाउनुप¥यो । र, त्यो कामलाई आर्जन गर्न सक्यो भनेदेखि प्रमुख धर्म भनेको त्यही हुन्छ भन्ने लागेर हामी त्यो आस्थाप्रति प्रतिबद्ध छौँ ।
११) यस प्राकृतिक चिकित्सालयमा उपचारमा अर्कको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन ?
– प्राकृतिक उपचारमा प्रयोग गरेका छैनौँ । प्राकृतिक चिकित्सामा एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि औषधि ख्वाइँदैन । हामीले आयुर्वेदिक चिकित्साका बारेमा पनि सोचिरहेका छौँ । आयुर्वेदिक अस्पताल पनि भयो भने त्यो प्रयोगमा आउँछ, तर अहिले सामान्यरुपमा मानिसहरुले विभिन्न औषधिका लागि बोतलको दुई सय रूपैयाँमा किनेर लानुहुन्छ । यस्तै, गाईको दूधको बिक्रीबाट पनि आम्दानी भएको छ ।
१२) आगामी योजना के–के छन् ?
– अबको योजना के छ भन्दाखेरि बायोग्यास निकाल्ने । महिनाको करिब–करिब ३५–४० हजार रूपैयाँ त हाम्रो ग्यासको निम्ति खर्च हुन्छ । बायोग्यास निकाल्यौँ भने त्यो बच्ने भयो, त्यो खर्चले गाईलाई पौष्टिक आहार ख्वाउन सकिने भयो । बायोग्यास निकालेपछि गोबरको लेदो अर्गानिक मलको निम्ति बढी प्रभावकारी हुँदोरहेछ । भर्खरै केही दिनअघि इन्डियामा आश्रममा हे¥यौँ । ३५÷४० प्रतिशत गोबरको लेदो राख्ने, त्यसमा घरबाट खाएर बढी भएर फालिने दाल, भात, तरकारी २० प्रतिशत मिसाउने, अर्काे कुरा पातपतिङ्गरलाई कटिङ गरेर त्यसमा जोडाएर राख्ने । त्यो गर्ने हो भनेदेखि यो वागीश्वरी आध्यात्मिक परिषद् सम्पन्न हुन्छ । यसरी काम पनि गर्ने, समाजलाई बाटो पनि देखाउने, समाजको सेवा पनि गर्न सकिँदोरहेछ ।
अर्काे योजना भनेको संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने छ । मानिसहरु के भन्छन् भने संस्कृत भनेको पुरानो परम्पराअनुसार पढ्ने र भगवान्लाई पूजा गर्ने खालको हो, तर संस्कृत भनेको भाषा हो, धर्म–संस्कार होइन । त्यो संस्कृत भाषामा पनि ऋषिमुनिहरुले धेरै अनुभवहरु गरेका छन् र उनीहरुले धेरै कुराहरु प्रयोग गरेका छन् । उनीहरुले यतिसम्म बनाएका छन् कि हवाईजहाजसम्म बनाउने काममा मेसिन तयारी गर्ने र त्यो कसरी चलाउने भन्ने उनीहरुले थ्योरी निकालेका थिए । तर, त्यो के भयो भने लोप भएर युरोपियनहरुले त्यसलाई उठाएर लगे, जसले गर्दा त्यो विज्ञान भनेर आज अगाडि आएको छ । विज्ञान भने पनि, धर्म भने पनि, काम भने पनि वास्तवमा तिनै कुरा हुन् । त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता किसिमका खोज हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा संस्कृत विश्वविद्यालय पनि खोल्नुपर्छ भनेर पहल सुरू गरिरहेका छौँ ।